မာလာဝီနိုင်ငံ၌ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Ana ကြောင့် လူ ၄ ဦး သေဆုံးခဲ့ကာ နိုင်ငံတွင်း၌လျှပ်စစ်မီးပြတ်တော်မှုဖြစ်ပွား - Xinhua News Agency
မော်လာဝီနိုင်ငံ၊ လီလွန်ဂွေးမြို့၊ အများသုံး ရေဘုံဘိုင်တစ်ခု၌ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက အလိုလျှောက်ထွက်သော ဘုံပိုင်ခေါင်းမှရေအားခပ်ယူနေသည်ကို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်တွင် တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
လီလွန်ဂွေးလ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Ana ကြောင့် ရေကြီးမှုများနှင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများကြောင့် မာလာဝီနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း၌ အနည်းဆုံး လူလေးဦး သေဆုံးခဲ့သလို ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းကစ၍ နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် လျှပ်စစ် မီးပြတ်တောက်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တောင်ပိုင်းခရိုင်များဖြစ်သော Chikwawaခရိုင်၊ Nsanjeခရိုင်၊ Phalombeခရိုင် နှင့် Mulanje ခရိုင်တို့တွင် ပြင်းထန်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး နေအိမ်များပြိုကျကာ အဓိကလမ်းမကြီးများအဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ခဲ့ပြီး၊ မိသားစုရာပေါင်းများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်း ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
” Mulanjeခရိုင် တွင်လူ ၁ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးလူ ၃၀ဦး သည် ထိခိုက်ဒဏ်ရာအမျိုးမျိုးရရှိခဲ့သည်’’ ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Chikwawa ခရိုင်ကော်မရှင်နာ ဖြစ်သူ Ali Phiri က ဇန်နဝါရီ ၂၅ရက် ညနေပိုင်းတွင် ခရိုင်အတွင်း လူသုံးဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး “နောက်ထပ်သေဆုံးမှုပိုမိုများပြားလာမည်ကို စိုးရိမ်မှုများရှိနေကြောင်း” ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Ana သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လွှတ်မှုအား ထိခိုက်စေခဲ့ပြီး မာလာဝီနိုင်ငံ၌ လျှပ်စစ်မီး ပြတ်တောက်နေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်နိုင်မှု ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ လျှပ်စစ်မီးထုတ်လွှတ်နိုင်ခြင်း မရှိကြောင်း မာလာဝီနိုင်ငံ၊ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မာလာဝီရဲဌာန၊ မာလာဝီကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့၊ ရေကြောင်းဌာန၊ မော်လဝီကြက်ခြေနီအသင်းနှင့် အခြားတာဝန်ရှိသူများ ပါဝင်သော ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များသည် “ပိတ်မိနေသောလူများရှိပါက ကယ်ဆယ်ရန်” အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာတွင် ရှိနေကြောင်း မာလာဝီ၏ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ သိရသည်။ (Xinhua)
LILONGWE, Jan. 26 (Xinhua) — At least four people have died in southern Malawi following floods and strong winds induced by tropical cyclone Ana, which has also left most parts of the country in blackout since Monday evening.
“One person has died in Mulanje and 30 people have sustained various degrees of injuries,” said the statement.
Meanwhile, Commissioner for Chikwawa District, Ali Phiri, confirmed Tuesday evening that three people have died in the district, adding “there are fears that more deaths are likely to be recorded.”
The Electricity Generation Company of Malawi said inastatement on Tuesday that over 70 percent of the country’s power generation capacity was not available.
Rescue teams comprising Malawi Police Service, Malawi Defense Force, the Department of Marine, the Malawi Red Cross Society, and other stakeholders are on the ground “to assist in rescuing people feared to be trapped,” according to Malawi’s disaster management department. Enditem